Ngaba ufanele wenze i-DIY yakho yeSinki yangasese isekwe ePennsylvania? | WOWOW IiFaucets-WOWOW IiFaucets
Ikhaya / Blog / Ngaba kufanelekile ukuba wenze i-DIY Yakho yangasese yeSinki esekwe ePennsylvania?
Ngaba kufanelekile ukuba wenze i-DIY Yakho yangasese yeSinki esekwe ePennsylvania?
2020 / 09 / 15 uhleloBlog 6523 0
le melana ixhaswe kwaye yanikelwa ngePatch imodeli Nxu lumene. Izimvo zichaziwe kule nto melana yiyo umbhali's siqu.
Khawuleza uphucule umhombiso wakho wasekhaya wangasese ngesinki esitsha esitsha sokuhlamba. (Shutterstock)
EPennsylvania, indlela ethe ngqo yokuphucula uhlobo lwendlu yokuhlambela kukufaka isink entsha. Nokuba awuyithandi na indlu yohlobo lwefama esisiseko okanye ujongo olubekwe eludongeni ngoku, lo msebenzi kulula ukujongana nawo kubanini abancedo.
Nangona kunjalo xa ufuna ukutshintshwa kombhobho okanye uhlengahlengiso oluphambili, kungcono ukuhamba nomsebenzi uye kwiingcali. Nantsi eyona nto ilungileyo ukuba uyithathele ingqalelo kwangaphambi kokuthatha isigqibo kwi-DIY isinki sakho sokuhlambela esimise okanye ubize umntu olungisa imibhobho yamanzi:
Kwangoko kunokuba ujonge isinki sokuhlambela esimiswe ngokwakho, cinga ngemeko yombhobho, idreyini, into ebotshiweyo kunye nesomisi. Ngaba bonke bafuna ukutshintsha? Ukongeza okongeziweyo ofuna ukukufaka endaweni, ubucukubhede obongezelelekileyo kulo msebenzi kuya kubakho i-DIYer.
Ukuseta ngokufanelekileyo isinki yakho entsha, uya kufuna ukuqinisekisa ukuthelekisa isikali kunye noqwalaselo lwesinki, uxinzelelo lwamanzi kunye nokucofa ukuze uqiniseke ukuba zonke ziyahambelana. Utshintsho olulula luhlala luthe ngqo kubantu abaluncedo ukuba bazigqibe ngokwabo. Ukuba ufuna ukufaka endaweni yayo nayiphi na imibhobho, yeyona inokwenzeka ukubiza igama lomtywini.
Mhlawumbi unendlu endala, eli ingalixesha elihle kakhulu lokutshintshiselana ngemibhobho yamanzi ephelelwe lixesha. Akufuneki kutsho:
Imibhobho yobhedu yokugqibela iminyaka engama-70 ukuya kweli-100
Imibhobho yobhedu inokugqiba ngaphezulu kweminyaka engama-50
Imibhobho yesinyithi ebunjiweyo igqibe iminyaka engama-50 ukuya kwengama-75
Imibhobho yentsimbi eyenziweyo igqiba iminyaka engama-75 ukuya kweli-100
Imibhobho yePVC yokugqibela ngaphezulu kweminyaka eli-100
Ngaba ufuna i-plumber ye-sink enye? Nxibelelana neengcali ukuze ufumane ixabiso.
Kwangoko kunokuba uthathe isinki yakho engenye, qiniseka ukuba unexesha elaneleyo lokuphelisa umsebenzi ngokwaneleyo. Indawo esinki iyakuthatha iiyure ezintandathu ukuya kwezisibhozo zomsebenzi, ukongeza kwimini kunye nesiqingatha sexesha elingasebenziyo xa i-silicone caulking yakho isoma. Ukuba ufuna ukuseta uphawu lokuzixabisa olutsha kwaye ucofe, ungalindela ukuzibophelela kokuthatha iiyure ezininzi ezongezelelweyo.
Ukuba kunokwenzeka uthembele ekuqeshweni kwengcali, unokulindela ukuhlawula phakathi kwe- $ 178 kunye ne- $ 1,410 yesinki entsha esetiweyo, exhomekeke kwindlela ebekwe ngayo. Isinki zentsimbi zihlala zibiza ixabiso elincinci ukuzibeka, kunye nezitshisi zethayile ezibiza eyona nto iphambili. Phakathi kukho iiporcelain kunye neesinki zokudibanisa. Ukuba kunokwenzeka ukuba unqume ukurenta ingcali, ungababuza ukuba ungazithenga ngokwakho isinki kumthengisi omkhulu wasentsimini. Ukuba zilungile ngokukuvumela ukuba wenze ukuthenga, kungenzeka ukuba kungakongela imali emsebenzini.
Umcebisi wasekhaya sisixhobo sokukhuthaza iPatch.
Oku kulungiswa kuxhaswe kwaye kwaxhaswa yiPatch Model Associate. Iimbono ezivakalisiweyo koku kubekwa kwindawo yobuqu yombhali.
Yiba nembeko. Yindawo yengxoxo ezithandekayo zemveli. Akukho lucalucalulo, ucalucalulo, intetho engcolileyo okanye eyoyikisayo enokunyanyezelwa.
Cacisa. Sebenzisa isihloko sakho sokwenyani, kwaye uphinde uphakamise amabango akho.
Yibambe iyinzalelwane kwaye inxulumene. Qinisekisa ukuba iimpendulo zakho zigcina kumxholo.
Umthombo weendaba: https://www.wowowfaucet.com
Ngaphambili :: Ukunyuka kweMfuno yeeNdawo eziLungekileyo ezingashukumiyo yokuNika abaThwali beMveli Ithemba leentsuku eziPhezulu eziPhambili next: Igumbi lokuphumla elincinci lokuSinki eliya kwenza uQeqesho olukhulu
Uluhlu ekufuneka ube nalo lweTile ukuze wenze ngokugqibeleleyo igumbi lakho lokuhlambela
Imigibe eMikhulu esibhozo ekuThengweni kweWare yezococeko, jonga ukuba ukhe waT...
Igumbi lokuhlambela elifanayo le-M² eli-5, kodwa oluyilo luyenza ibukeke ngokuphindwe kabini njengenkulu, kwaye Apha&...
2022 / 01 / 27 624
IiFaucets zeKhitshi eziBalaseleyo ngo-2021-Uphononongo kunye neSikhokelo sokuThenga
2022 / 01 / 25 1138
Yintoni eyenza eyona ngqiqo yokufaka iithayili ejikeleze umjelo ophantsi?
Ngaba uyithayile iBathroom kuqala okanye ngaba uyayifaka yangasese kuqala?
2022 / 01 / 23 1476